दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध: किन मिलेर बस्नुपर्छ? | युवाहरू सोध्छन्‌
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उम्बुन्डु एस्टोनियन काचिन काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किलुबा कोरियन क्रोएसियन क्षोसा ग्रीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
“कहिले मित्र त कहिले शत्रु”
मिलेर बस्नुपर्ने दुई वटा कारण
दाजुभाइ दिदीबहिनी “कहिले मित्र त कहिले शत्रु” बन्छन्‌। तपाईं तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ अनि तिनीहरू पनि तपाईंलाई माया गर्छन्‌। तर कहिलेकाहीं तिनीहरूसित ठ्याक मिल्दैन। अठार वर्षीया हेलेना भन्छिन्‌, “भाइले मलाई दिक्क पार्छ। के गर्दा वा के भन्दा मेरो पारो तात्छ, उसलाई राम्ररी थाह छ।”
दाजुभाइ दिदीबहिनीबीचको कुनै-कुनै मतभेद कुराकानी गरेर सुल्झाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि:
एउटै कोठामा बस्ने दुई दाजुभाइबीच प्राइभेसीको विषयमा भनाभन हुन सक्छ। यसलाई कसरी सुल्झाउने? त्याग गर्न सिक्नुहोस्‌ र एकअर्काको भावनाको कदर गर्नुहोस्‌। लूका ६:३१ मा पाइने बाइबल सिद्धान्त लागू गर्नुहोस्‌।
दुई दिदीबहिनीले एकअर्काको लुगा नसोधी लगाउलान्‌। यसलाई कसरी सुल्झाउने? यसबारे कुराकानी गर्नुहोस्‌ र स्पष्ट सीमा तोक्नुहोस्‌। २ तिमोथी २:२४ मा पाइने बाइबल सिद्धान्त लागू गर्नुहोस्‌।
कुनै-कुनै अवस्थामा दाजुभाइ दिदीबहिनीबीचको समस्या अझ गम्भीर हुन्छ र त्यसको नतिजा नराम्रो हुन सक्छ। बाइबलमा पाइने दुई वटा उदाहरण विचार गर्नुहोस्‌:
आफ्नो भाइ मोशाप्रति मरियम र हारूनलाई डाह लाग्यो। यसको परिणाम नराम्रो भयो। गन्ती १२:१-१५ को विवरण पढ्‌नुहोस्‌। त्यसपछि आफैलाई सोध्नुहोस्‌: “दाजुभाइ दिदीबहिनीको डाह नगर्न म के गर्न सक्छु?”
कयिन असाध्यै रिसाए अनि तिनले आफ्नो भाइ हाबिलको हत्या गरे। उत्पत्ति ४:१-१२ को विवरण पढ्‌नुहोस्‌। त्यसपछि आफैलाई सोध्नुहोस्‌: “दाजुभाइ दिदीबहिनीसित व्यवहार गर्दा म कसरी रिस थाम्न सक्छु?”
दाजुभाइ दिदीबहिनीसित मिलेर बस्नु गाह्रो भए पनि यसो गर्न प्रयास गर्नुपर्ने दुई वटा कारण छन्‌।
१. यो परिपक्वताको चिन्ह हो। एलेक्स नाम गरेका युवक यसो भन्छन्‌, “म बहिनीहरूसित झनक्क रिसाउने गर्थें। अहिले उनीहरूसित अझ शान्त र धीरजी हुन सकेको छु। मलाई आफू परिपक्व भए जस्तो लाग्छ।”
बाइबल भन्छ: “धीरज धारण गर्नु ठूलो समझशक्‍ति देखाउनु हो, झ्वाट्टै रिस गर्नु मूर्खताको चरमसीमा हो।”—हितोपदेश १४:२९.
२. यो भविष्यको लागि राम्रो प्रशिक्षण हो। तपाईंले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीको कमजोरी सहन सक्नुहुन्‍न भने आफ्नो जोडी, सहकर्मी, कर्मचारी वा अरूको कमजोरी कसरी सहन सक्नुहुन्छ र?
तथ्य: भविष्यमा अरूसितको सम्बन्ध राम्रो हुने/नहुने कुरा तपाईं कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ अनि यस्तो क्षमता विकास गर्ने सबैभन्दा उपयुक्‍त ठाउँ परिवार नै हो।
बाइबल भन्छ: “सबै मानिससित शान्तिसित बस्न तिमीहरू सक्दो कोसिस गर।”—रोमी १२:१८.
के तपाईं आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीसितको समस्या सुल्झाउन मदत चाहनुहुन्छ? “तपाईंका साथीहरू के भन्छन्‌” भन्‍ने लेख पढ्‌नुहोस्‌ अनि “दाजुभाइ दिदीबहिनीसित कसरी मिलेर बस्ने?” भन्‍ने अभ्यास सामग्री हेर्नुहोस्‌।
“मेरा तीन जना दिदीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसित मिलेर बस्न सधैं सजिलो छैन। तर मलाई राम्ररी चिन्‍ने र सधैं साथ दिने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भनेर मैले बुझेकी छु।”—जेसिका।
“कहिले दाइले गर्दा मलाई रिस उठ्‌छ, कहिले मैले गर्दा दाइलाई रिस उठ्‌छ। तर म दाइलाई माया गर्छु। उहाँ सधैं मेरो हौसला बढाउनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै हार मान्‍नुहुन्‍न अनि दिलोज्यान दिएर काम गर्नुहुन्छ। दाइको यो कुरा मलाई साह्रै मन पर्छ।”—टाइलर।
“मलाई मानिसहरूसित समय बिताउन मन पर्छ। त्यसैले दुई जना भाइ हुनु मेरो लागि वरदानै हो। तिनीहरूले गर्दा आफूभन्दा फरक व्यक्‍तिसित कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले सिक्न सकेकी छु। तिनीहरूजस्तो भाइ पाएकोमा म निकै खुसी छु।”—क्यामियो।
दाजुभाइ दिदीबहिनीसित कसरी मिलेर बस्ने?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसित किन मिलेर बस्नुपर्छ?